Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Njem Nleta Caribbean na -ebido Network Community
Akụkọ ọhụrụ Barbados • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
CTO weputara Network Tourism Network
Tourtù Na -ahụ Maka Njem Nleta Caribbean (CTO) ewepụtala Network Community Tourism Network (CCTN) iji nye usoro iji kwado mmepe CBT na Caribbean na -aga n'ihu. Ndị isi mmepe ngwaahịa njem nlegharị anya na mpaghara Caribbean nwere ugbu a akụrụngwa ha ga-esi enweta mgbe ha na-emepe mmemme ime obodo (CBT).
Netwọk a ga-enye usoro ikpo okwu iji kwado mmepe na-aga n'ihu na njem nlegharị anya obodo na mpaghara.
Netwọk a ga -eme ka mgbanwe omume kacha mma n'etiti mba ndị otu CTO na ndị mmekọ mmepe njem nwere mmasị.
Ọ ga-enyekwa aka chọpụta mkpa iwulite ikike yana ihe ịma aka na ohere maka mmepe CBT.
Amanda Charles kwuru, "Njem nlegharị anya nke obodo na-enye ohere iji jikọta oghere mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke akụ na ụba nke obodo, na-enye ndị otu obodo ohere ụzọ obibi ndụ ga-adigide, ma bụrụkwa ụzọ maka isonye na ike nke ndị obodo na njem nlegharị anya," Amanda Charles kwuru. Ọkachamara ọkachamara njem nlegharị anya nke CTO. "Netwọk a na -enye ndị otu CTO ohere ịkekọrịta ihe ọmụma, akụrụngwa, na omume kacha mma iji melite ahụmịhe njem obodo na mmetụta akụ na ụba."
N'ime ọrụ CCTN bụ nkwalite na nkwado nke atụmatụ mmepe mpaghara na CBT, na -enye ntinye, na -atụ aro mmemme na omume iji bulie ọhụhụ na uru nke CBT dị ka ngwaahịa njem mpaghara, yana mgbanwe ahụmịhe na atụmatụ mba na mpaghara.